Ny Fiandrasana Ny Fanakonà-Masoandro Tany India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Febroary 2018 17:11 GMT
Vakio amin'ny teny Filipino, Français, македонски, Español, বাংলা, English
Nisy ny fientanentanana hita nanjaka tao amin'ny firenena tamin'ity fanakona-masoandro ity. Na dia nilaza aza ny bilaogy Earthquakeforcasting fa sokajin'olona miisa efatra ihany no liana amin'ny fanakona-masoandro tany India dia ny astronoma, ny astrôlôgy, ny mpivavaka ary mpizahan-tany, kanefa ao anatin'ny iray amin'ireo sokajy ireo avokoa ny ankamaroan'ny Indiana .
Ho an'ny Haindò, tsy tranga fotsiny amin'ny astronomia ny fanakona-masoandro fa tena misy dikany lehibe ihany koa amin'ny fivavahana sy ny finoana ara-kolontsaina. Maro ireo angano no mifandray amin'ny fanakona-masoandro. Miezaka manazava ny sasany momba izany ato amin'ity lahatsoratra ity ny bilaogy Astronomy India.
Nanoratra ilay bilaogera Goodread fa na dia ny tanànakely tahaka an'i Taregana ao Bihar aza dia nientanentana tamin'ny fiomanana nanomboka tamin'ny fanendren'ny NASA ny toerana ho anisan'ny toerana tsara indrindra hahitana ity fanakona-masoandro ity.
Raha ny marina, nilaza ny bilaogy DesPardes India fa nisy ny “sidina natokana ho an'ny fanakona-masoandro” nokarakaraina mba hanomezana fahafaham-po ary natao tamin'ny sarany 75.000 Ropia indianina (eo amin'ny 1050 dolara amerikana), saran'ny toerana iray eo akaikin'ny varavarankely mandritra ny sidina adiny 3 avy any Delhi.
Nivory tao amin'ny toerana fivahiniana masina toa an'i Varanasi, Kurukshetra (Haryana) sns..ny mpivavaka Haindoa mba hilona ao amin'ny renirano. Nanantena ny handray mpivahiny masina maherin'ny 100.000 ny governemanta tao an-toerana tao Haryana ary nanolotra ihany koa ny fiantohana amin'ny loza mety hitranga rehetra ho an'izy ireo.
Tsara ny mandray ny fepetra rehetra mba hiarovana ny masonao raha sendra manatrika ny tranga mahagaga toy ity ianao.
7 andro izayAzia Atsimo